Anil Kapoor Oo Shaaciyay ‘Farxaddii Ugu Weyneyd’ Ee Uu La Wadaagay Rishi Kapoor | Kaafi News
Anil Kapoor Oo Shaaciyay ‘Farxaddii Ugu Weyneyd’ Ee Uu La Wadaagay Rishi Kapoor
Jilaacaga caanka ah ee shirkadda filimada hindiga ee Bollywood, Anil Kapoor ayaa soo bandhigay “waqtigii ugu farxadda badnaa” ee uu la wadaagay atoorihii dhawaan geeriyooday, Rishi Kapoor.
Anil ayaa bogagga uu ku leeyahay baraha bulshada, sida Instagram iyo facebook soo dhigay sawirro ku saabsan xasuusta daahfurkii filimkii lagu magacaabay Saawariya, ee soo baxay sanadkii 2007-dii, kaasoo ahaa filimkii ay xirfaddooda ku billaabeen gabdhiisa Sonam Kapoor iyo wiilka uu dhalay Rishi Kapoor ee lagu magacaabo Ranbir Kapoor.
Labada jilaa ee rug caddaayada ah ayaa ku kulmay xafladda daahfurka Filimkaas, xilligaasoo ay garab taagnaayeen carruurtooda oo xirfadda ka dhaxashay.
Anil ayaa soo xushay sawirro ay ka muuqato farxad oo munaasabaddaas laga qaaday, waxaana ka muuqda Rishi iyo Neetu oo aad u tamashleynaya.
Bartiisa Twitter-ka ayuu Anil sawirradaas kula qoray: “Xasuustii James, daahfurkii xirfadda jilaanimo ee Sonam iyo Ranbir, anigoo la jooga Neetu iyo Rishi. Waa mid ka mid ah xilliyadii ugu farxadda badnaa ee nolosheyda soo maray…”
Sawirrada iyo qoraalka uu Anil soo dhigay waxaa jecleystay dad badan oo ka mid ah taageerayaashiisa ku taxan, waxaana ku jiray wiilka uu adeerka u yahay, atoorahana noqday ee Arjun Kapoor.
Mid ka mid ah taageerayaasha ayaa soo qoray: “Haa runtii wuxuu ahaa xilli xasuus leh. Qof kalena wuxuu qoray: “Bal ka warran waxaanoo dhan hadda way soo afjarmeen.”
Filimka Saawariya oo uu hagay Sanjay Leela Bhansali, siyaaso kala duwan ayaa looga fal celiyay, dadka qaarna way ammaaneen, laakiin kama uusan gadmin box office-ka.
Rani Mukerji ayaa filimkaas qeyb ka ahayd, halka Salman Khan uu isaguna kasoo muuqday.
Rishi wuxuu geeriyooday 30-kii bishii lasoo dhaafay kaddib markii uu labo sano la dagaallamayay kansar.
Maalintii uu geeriyooday, Anil wuxuu qoraal murugo badan ku sharraxay sababta uu Rishi magaciisa ugu yeeray James.
Farxaddii uu ka helay meel uu u tagay in timaha looga jaro
“Sababta aan Rishi Kapoor ugu yeeray James waxay ahayd maadaama anigana aanan aqoonin qof kale oo u muuqaal qurxoon sida jilaaga Mareykanka ah ee James Dean, isaguna wuu jeclaa inaan magacaas ku dhoho, waligey wuxuu ii ahaan doonaa James.”
Rishi Kapoor, waxaa lagu tilmaami jiray halyeygii haasaawaha ee shirkadda filimada Bollywood-ka ee dalka Hindiya.
Wuxuu qeyb ka ahaa jilayaasha reer Kapoor loo yaqaanno ee sanadaha badan aqlabiyadda ku lahaa filimada ugu caansan Boolywoodka.